Jackson Suber: Kuhwina Kwakanaka kuWhite Sands Bahamas NCAA Invitational
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jackson Suber: Kuhwina Kwakanaka kuWhite Sands Bahamas NCAA Invitational
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Sports • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Jackson Suber waOle Miss akahwina wechipiri wepagore weWhite Sands Bahamas NCAA Kukoka makwikwi evarume Svondo paOcean Club Golf Course kuAtlantis Resort uye Ole Miss akatonga makwikwi echikwata, achirova East Tennessee State ne11 shamhu.
East Tennessee State yakapedza semumhanyi-munhangemutange mumakwikwi ane mukurumbira ezvikwata gumi nezviviri.
Suber, mukuru kubva kuTampa, Florida, akatora zita rake rechitatu.
Kuve muno muBahamas kwakanaka kwazvo. Uye kukunda muparadhiso kunoita kuti zvive zvakanyanya kukosha. Chero nguva yaunokunda, zvakanaka. Asi kuhwina kunze kuno kunoshamisa, Suber akadaro.
Suber, mukuru kubva kuTampa, Florida, akapa makadhi ekupedzisira-kutenderera 2-pasi pemakumi manomwe pa70-yadhi Ocean Club kosi kuti apedze aine matatu-anosvika gumi nerimwe-pasi pe7,159 sitiroko imwe iri nani kupfuura Tony Briggs weSan Francisco. Briggs aive neakanakisa 11-pasi pemakumi matanhatu neshanu, iyo yakaderera kutenderera kwesvondo, ukuwo Albin Bergstrom wekuSouth Florida aive imwe sitiroko kumashure munzvimbo yechitatu mushure mekuvhara makumi matanhatu nemasere.
A Ping All-American Honorable Kutaurwa mwaka wadarika weRebels mwaka wadarika, Suber akaunganidza zita rake rechitatu.
“Raive svondo rakanaka kuchikwata chedu. Takatamba takasimba, "Suber, makumi maviri nemaviri, akadaro. “Kubva pazuva rekutanga, takadzvanya zvine simba mazuva maviri akatevera, uye tikawedzera hurongwa hwedu hwemutambo. Zvakabhadhara – uye takatanga kuzvipatsanura kubva kune zvimwe zvikwata. Kuve muno muBahamas kwakanaka kwazvo. Uye kukunda muparadhiso kunoita kuti zvive zvakanyanya kukosha. Chero nguva yaunokunda, zvakanaka. Asi kukunda pano kunoshamisa. "
“Jackson akashanda nesimba zvakanyanya. Ndinoziva kuti tinozvitaura pamusoro pemutambi wedu mumwe nemumwe, asi izvi zvave nemakore zvichiuya. Anga ari padhuze, asi haasati abuda kusvika parizvino,” akadaro murairidzi weRebels, Chris Malloy. “Chero paunohwina makwikwi akadai, munzvimbo yakaita seino, kuhwina muparadhiso, zvinotonyanya kukosha. Aka ndekekutanga pane akawanda kuhwina kwaJackson. "
Pamusoro peSuber, Ole Miss, uyo akatungamira mushure mechikamu chechipiri, akawana pamusoro-gumi anopedza kubva kuna Brett Schnell (T-10; 7), naEvan Brown (T-212; 10). Jack Gnam (T-213; 29) akapedzisa zvibodzwa zveRebels pavakapedza vari 217-pasi pe26.
“Pachikoro, takava nevhiki yakanaka. Kunze kwekosi, zvakaoma kurova Atlantis neOcean Club Golf Course, "akadaro Malloy. “Tinoenda kunzvimbo dzakawanda dzakanaka, asi handina chokwadi chekuti vangani vanoenzanisa neizvi. Kusangana neBahamas kwave kushamisa, zvinoonekwa uye manzwi ndezvechipiri kune chimwe. "
Inotungamirwa naBriggs naSoren Lind, avo vakapedza T-7 vaine 4-pasi pe212 yakazara, East Tennessee State yakawana 849 kuti ipedze yechipiri ukuwo San Francisco yakasungirira yechitatu pa851 nemutambi Arkansas kuLittle Rock, iyo yakatungamira mushure memutambo wekutanga. South Florida yaive yechishanu iine 852 yakazara.
Vhiki rakapfuura, panguva yechinomwe-timu vakadzi White Sands Bahamas NCAA Invitational, Kirsten Baete wekuNebraska akapfura yekupedzisira-round even-par 72 ndokuisa 10-pasi pe206 kuti akunde waya-to-waya nesitiroko imwe chete pamusoro peCampbell's Emily Hawkins. Mumatanho echikwata, Campbell, aine vatambi vatatu vakapedza vari pakati pepamusoro-gumi, akarova Cornhuskers nezvibodzwa zvina, ukuwo mutambi weYunivhesiti yeMiami akapedza pechitatu.
Iyo ine mukurumbira White Sands Bahamas NCAA Invitational, ine vamwe vepamusoro zvikoro zvegorofu muUnited States, yakapeta gore rechipiri nemavhiki maviri akabudirira emakwikwi akasimba, uye munguva pfupi yave imwe yemagungano epamusoro egorofu pakati penhengo yeNCAA. zvikoro.
"Ranga riri svondo rinoshamisa, uye yanga iri rukudzo kugamuchira muno muBahamas," Jake Harrington, murairidzi wegorofu wechikwata chevarume kuArkansas kuLittle Rock. "Ichi chave chiitiko chekirasi yekutanga, uye pasina kupokana, chichava chimwe chezviitiko zvekutanga mukoreji gorofu."
Akawedzera Suber: “Makwikwi ese akafambiswa zvakanaka; chaive chiitiko chepasi rose. Zvave zvinoshamisa kupeta mwaka wangu wekudonha pano, kunyanya nemamiriro ekunze, mhenderekedzo yegungwa, uye zvese zvinopihwa neAtlantis. Pasina kupokana, ndingangokurudzira chiitiko ichi kune vandichazotamba navo pamwe nezvimwe zvikoro. "
Vhiki kunze kunhandare yegorofu muThe Bahamas, ivhiki muparadhiso, "akadaro Mutevedzeri weMutungamiriri Mukuru I. Chester Cooper, Gurukota reBahamas reTourism, Investments & Aviation. "Zvaifadza chaizvo kugamuchira vamwe vevatambi vegorofu vepamusoro paOcean Club Golf Course, uye ndinovimba kuti vatambi vese vanokwikwidza vakanakidzwa nenguva yavo muno muBahamas. Tinokoka vese vanofarira gorofu, vangave vachangobva kana nyanzvi kuti vauye kuzosangana nesu kana maviri egorofu."
Nezvitsuwa zvinopfuura 700 nemakasi uye 16 nzvimbo dzakasiyana dzezvitsuwa, Bahamas ingori mamaira makumi mashanu kubva kumahombekombe eFlorida, ichipa nyore kubhururuka-kure kupukunyuka kunotakura vafambi kubva kune yavo yemazuva ese. Zvitsuwa zveBahamas zvine hove dzepasi rose, kunyura, kukwira magwa, uye zviuru zvemamaira emvura yepasi inoshamisa kwazvo uye mahombekombe akamirira mhuri, vakaroorana, uye vafambi. Ongorora zvitsuwa zvese zvekupa pa bahamama.com kana uri Facebook, YouTube or Instagram kuti uone nei Zviri Nani muBahamas.